Lego စူပါfriends - ဒါက LEGO လား Batman ရုပ်ရှင်နောက်ဆက်တွဲခေါင်းစဉ်?
16 / 06 / 2021 29 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 349 Views စာ0မှတ်ချက် ဖျက်သိမ်း, ခရစ်မက်ကေး, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်, Lego, Lego Batman, Lego Batman Movie,, Loki, မိုက်ကယ် Waldron, အထူးကောင်းမွန်သောfriends, အဆိုပါ Lego Batman Movie,
များအတွက် ဦး ခေါင်းစာရေးဆရာ MarvelLoki စီးရီးများသည် The အတွက်အလုပ်လုပ်သည့်ခေါင်းစဉ်ကိုဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် Lego Batman အားဖြင့်သွားပြီတဲ့တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်ပုံပြင်တစ်ခုကိုးကားအတွက်ရုပ်ရှင်ဆက်ဆက်။
သင်မှတ်မိနိုင်သည် DCအမေရိကတရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ပေမယ့်စူပါကောဘယ်လိုလဲfriends? စူပါဟီးရိုးအဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်အခြားစူပါပါဝါဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သည့်ကာတွန်းစီးရီးများသည်ဖျက်သိမ်းလိုက်သော The Lego Batman စီမံကိန်းအတွက်စာရေးဆရာဟောင်း Michael Waldron အဖြစ်ရုပ်ရှင်နောက်ဆက်တွဲသည်လူမှုရေးမီဒီယာများသို့သူ၏စီမံကိန်းအတွက်သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဝေမျှရန်ဖြစ်သည်။
Lego အထူးကောင်းမွန်သောfriends ဒါရိုက်တာ Chris McKay ကဲ့သို့အဓိပ္ပာယ်ရှိသောဖျက်သိမ်းပြီးနောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်း၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည် ယခင်ကထုတ်ဖေါ် ဇာတ်လမ်းအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မယ်လို့ Batman နှင့်ကျန်တရားရေးအဖွဲ့ချုပ်။
- Michael Waldron (@michaelwaldron) ဇြန္လ 14, 2021
စာရေးသူမှပေးသောခေါင်းစဉ်စာမျက်နှာ၏ကျန်စီမံကိန်း၏နောက်ကွယ်ရှိလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်ဤမျှလောက်များစွာသောလူများပါဝင်ခြင်းသည်ပါးပြင်၌လျှာဖြစ်သည်။ စီစဉ်ထားရှိခဲ့လျှင် crossoverနောက်ထပ်လိုင်းအချို့လည်းထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ဒီနောက်ဆက်တွဲ uncancelled ခံရမဆိုမျှော်လင့်ချက် p ၏အလငျး၌မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်နေစဉ်artအကြား nership Lego Group နှင့် Universal ရုပ်ပုံများ၊ စီမံကိန်းအပေါ်လုပ်ဆောင်သောအဖွဲ့ ၀ င်များပိုမိုလာရောက်နိုင်မည်ကိုသာကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည်။ Lego Batman ရုပ်ရှင်။
← LEGO သေတ္တာထဲတွင်ကိုကင်းမှောင်ခိုတင်သွင်းသည့်အတွက်လူနှစ်ယောက်ထောင်ကျခဲ့သည်
Lego Ideas 21327 လက်နှိပ်စက်အလွန်နယ်ပယ်ကိုကိုးကားပါဝင်သည် →